‘भैरे’, ‘पण्डित बाजेको लौरी’ र ‘चक्कर’ मध्ये कुने हेर्ने ? « Ramailo छ
‘भैरे’, ‘पण्डित बाजेको लौरी’ र ‘चक्कर’ मध्ये कुने हेर्ने ?
यो शुक्रबार तीन नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् । ‘भैरे’, ‘पण्डित बाजेको लौरी’ र ‘चक्कर’ एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् । क्युएफक्स मल्टिप्लेक्समा ‘पण्डित बाजेको लौरी’ले पाँच शो पाउँदा ‘चक्कर’ तीन शो र ‘भैरे’ लाई दुई मात्र शो दिइएको छ । फ्राइडे रिलिज तीन फिल्मबारे छोटो चर्चा गरौं ।
एभ्रेष्ट सूर्य बोहोरा निर्देशित फिल्म ‘भैरे’ मा अभिनेता दयाहांग राई शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । दयासँगै फिल्ममा बर्षा सिवाकोटी, बुद्धि तामांग, विक्रान्त बस्नेत, सुरक्षा पन्त, अनुभव रेग्मी, जान्ह्वी बोहोरा लगायत कलाकारहरुको अभिनय छ । ‘भैरे’ देशप्रेम र अर्गानिक कथा वस्तुमा बनेको निर्माण पक्षले बताउँदै आएको छ । बुद्धि र सुरक्षासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
दीपक ओली निर्देशित फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’ पण्डित्याँईं परम्परा र बादी प्रथा सम्बन्धी बनेको फिल्म हो । जहाँ कलाकार प्रविण खतिवडा र नायिका सन्ध्या केसीको मुख्य भूमिका रहेको छ । साथमा विजय बराल, मरिस्का पोखरेल, भोलाराज सापकोटा, प्रमोद अग्रहरी लगायत कलाकारले फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । पण्डित बाजेको लौरी ले बुधबार सम्पन्न प्रिमियर शोमा निकै प्रशंसा पाएको थियो । ‘पण्डित बाजेको लौरी’ प्रिमियरको भिडियो हेर्नुस् :
अनुष्क रौनियार निर्देशित फिल्म निर्देशित फिल्म ‘चक्कर’ एक खालको प्रयोगात्मक फिल्म हो । जहाँ अर्पण थापा, ऋचा शर्मा, सृजना सुब्बा, एवन राज उप्रेती, स्मृति ढुंगाना लगायतको अभिनय छ । फिल्ममा रविन आचार्यको लगानी तथा सिनेम्याटोग्राफी छ । सृजना र एवनसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :